Wararka – Page 1591 – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Maxkamada dambiyada dalka Britain oo Maanta Xukun ku Riday Wiil da’yar oo Soomaali ah.
Wargeyska daily mail ee kasoo baxa dalka ingiriiska ayaa qoray in maanta xukun xabsi ah lagu xukumay Abdullah Ahmed Jama Farah oo 15 sano jir ah kaasi oo la sheegay in uu doonayey ku biirida islaamiyiinta daacish waxaana lasoo qabtay wiilkaasi soomaalida ah isaga oo u safri rabay dalka Syria. Nuur xasan oo saaxiib la ah wiilkaan ayaa ku caawinayey ...
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo magaalada Munich kaga qeybgalaya Shirka Caalamiga ee Amniga iyo Ka Hortagga Xasaradaha Dunida
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa ka degey magaalada Munich ee dalka Jamhuuriyadda Federaalka ee Jarmalka, isagoo ka qeybgalaya Shirka 52-aad amniga ee Munich (Munich Security Conference). Shirkan caalamiga ah ayaa waxaa ka soo qeybgalaya ilaa 30 hoggaamiye oo waddamada dunida ka socda, iyo ilaa 70 wasiirro dibadeed iyo difaaca. Arrimaha ugu waaweyn ...
Dhageystayaal kusoo dhawaada warka Duhur Radio Simba ee Magaalada Muqisho waana Duhurnimo jimco ah Tariikhdana ay ku beegan Tahay 12-2-2016 Warka Duhur 12-02-2016
Maleeshiyo Beeleedyo Soomaali ah oo ay Hubaysay Kenya oo Dhibaatooyin ka Wada deegaanada Xudduudka
Saraakiisha ciidamada dowlada soomaliya ee Gobolada Jubooyinka ayaa dowlada Kenya ku eedeeyay in ay maleeshiyo beeleedyo soomali ah ay kusoo daabulayso Gobolada Jubooyinka iyo gedo si ay halkaas dhibaatooyin ugu geystaan. C/rashiid Macali Gaas oo kamid ah saraakiisha ciidamada dowlada soomaliya ee Gobolada Jubooyinka oo la hadlay idaacada simba ee Magaalada Muqdisho ayaa sheegay in haatan ay Gobolada jubooyin iyo ...
Page 1,591 of 1,771« First...1,5601,5701,580«1,5891,5901,5911,5921,593 » 1,6001,6101,620...Last »